Fifandonana tamin’ny dahalo – Isandra Fianarantsoa: ampolony maty, giazan’ny dahalo ny razana sasany | NewsMada
Fifandonana tamin’ny dahalo – Isandra Fianarantsoa: ampolony maty, giazan’ny dahalo ny razana sasany
Misy ireo mbola velona, saingy miafina. Voalaza fa mahatratra ampolony kosa ireo namoy ny ainy, saingy vao razana telo no hitan’ny fokonolona sy ny zandary hatramin’ny omaly. Giazan’ny dahalo mantsy ireo razana hafa. Izany ny vokatry ny fifandonanana nahery vaika teo amin’ny dahalo sy ny fokonolona, tao Isandra, Fianarantsoa, omaly maraina.
Mpikambana mpiompy ao amin’ny fikambanana antsoina hoe Soa miray dia na SMD ireto niharan’ny herisetran’ny dahalo ireto. Araka ny fampitam-baovao voaray, hamonjy tsenan’omby ao Ambalavao ireto mpikambana ao amin’ny SMD ireo ka nifanehatra tamin’ny andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika tao amin’ny fokontany Mahazoarivo, kaominina ambanivohitra Andoharanomaitso, distrikan’Isandra, omaly. Raikitra ny fifandonana ka ampolony mahery ireo mpikambana lavon’ny balan’ny malaso. Dahalo maromaro ihany koa indray maty nandritra ny fifandonana. Voatery niverin-dalana, araka izany, ny sasany amin’ireo mpikambana nampandre haingana ny zandary. Nisy ny fikarohana ny fatin’ireo mpikambana namoy ny ainy, ny alakamisy teo. Nidina tany an-toerana ny zandary naka ny razana ka razana telo hatramin’ny omaly, raha ny fampitam-baovao farany, no fantatra fa tonga ao Ambalavao. Mbola misy razana maromaro koa tavela tao amin’ilay toerana nisian’ny fifandonana. Naterina omaly maraina ihany any amin’ny kaominina Besoa sy Tomboarivo, toerana niaviany, ireo niharam-boina.
Nandry an-tanana ny fikarakarana ireo niharam-boina ny fikambanana, ny zandarimaria miampy ireo tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana. Nisy, araka izany, ny fivoriana maika niarahan’ireto tompon’andraikitra isan-tsokajiny ireto amin’ny hakana ireo razana ambiny ao amin’ny fokontany Mahazoarivo, distrikan’Isandra. Fantatra izao, araka ny fampitam-baovao farany fa giazan’ireo dahalo ny fatin’ireo mpikambana sasany ao amin’ny SMD. Nanao antso avo koa ny fokonolona any an-toerana amin’ny tokony handraisana fepetra hentitra manoloana izao tsy fandriampahalemana izao. Andrasana, araka izany, ny tohin’ity raharaha namoizana ain’olona marobe ity.